မကှေးတိုငျးနဲ့ စဈကိုငျးတိုငျးမှာ ရဲအခြုပျခနျးဖောကျပွီး အခြုပျသားတှေ ထှကျပွေး – Voice of Myanmar
မကှေးတိုငျးနဲ့ စဈကိုငျးတိုငျးမှာ ရဲအခြုပျခနျးဖောကျပွီး အခြုပျသားတှေ ထှကျပွေး
မကှေး၊ အောကျတိုဘာ ၆ -၂၀၂၀
မကှေးတိုငျး၊ မငျးဘူးခရိုငျ၊ ပှငျ့ဖွူမွို့၊ ပှငျ့ဖွူမွို့မရဲစခနျးက အခြုပျခနျးနဲ့ စဈကိုငျးတိုငျး ကလေးမွို့၊ ကလေးမွို့မရဲစခနျးက အခြုပျခနျးတှထေဲက အခြုပျကခြံနသေူတဈခြို့ ဖောကျထှငျးထှကျပွေးသှားတယျလို့ ရဲတပျဖှဲ့အသိုငျးအဝိုငျးကနေ သိရပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၅ ရကျနေ မနကျ ၅ နာရီခှဲအခြိနျခနျးက မကှေးတိုငျး၊ ပှငျ့ဖွူမွို့၊ ပှငျ့ဖွူမွို့မရဲစခနျး အခြုပျခနျးက အခြုပျသားတဈယောကျနဲ့ စဈကိုငျးတိုငျး၊ ကလေးမွို့၊ ကလေးမွို့မရဲစခနျး အခြုပျခနျးက အခြုပျသား ၇ ယောကျဟာ အခြုပျခနျးကို ဖောကျထှငျးထှကျပွေးကွတာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
” ပှငျ့ဖွူအခြုပျက ဆိုငျကယျသူခိုး ဆိုငျကယျရာဇာ တရားခံတဈယောကျ အခြုပျခနျးထဲက မိလ်လာခုံပျေါကနေ မကျြနှာကကျြကို ဖောကျထှငျးထှကျပွေးတာပါ၊ ကလေးရဲစခနျးကတော့ ဘယျလိုပွေးသလဲ မသိဘူး၊ အခြုပျသား ၇ ယောကျဖောကျထှငျး ထှကျပွေးတာ ၆ ယောကျပွနျမိပွီး ၁ ယောကျကတော့ ထှကျပွေးလှတျမွောကျနတေုနျး ဖွဈတယျ”လို့ ရဲဝနျထမျး တဈယောကျက ပွောပါတယျ။.
ကလေးမွို့မရဲစခနျး အခြုပျက အခြုပျသား ၇ ယောကျဟာ အောကျတိုဘာ ၄ ရကျနေ့ မနကျ ၃ နာရီအခြိနျက အခြုပျခနျးကို ဖောကျထှငျးထှကျပွေးခဲ့တာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
” မကှေးတိုငျး ရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးကွီးလှိုငျတငျ့က မွိုငျမွို့နယျ၊ ကနျးနီရှာမှာဖွဈတဲ့ NLD အဖှဲ့ဝငျ ကိုမွငျ့နိုငျ အိမျဖကျြစီးခံရတဲ့ ကိစ်စသှားနတေဲ့အခြိနျမှာ ပှငျ့ဖွူမွို့မရဲစခနျး အခြုပျခနျးဖောကျပွေးခံရတာဖွဈတယျ ” လို့ ပှငျ့ဖွူမွို့မရဲစခနျးက ရဲဝနျထမျးတဈယောကျက ပွောပါတယျ။
ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျထားတဲ့ ကိုဗဈ ၁၉ ကပျရောဂါ ညှနျကွားခကျြတှထေဲမှာ လူတဈဦးနဲ့ တဈဦး ၆ ပအေကှာ နထေိုငျရမယျလို့ ထုတျပွနျထားပမေမယျ့ လကျတှအေ့ခွအေနမှောတော့ ရဲစခနျး အခြုပျခနျးတှထေဲမှာ အဲ့ဒီ ညှနျကွားခကျြအမိနျ့ကို လိုကျနာဖို့ အခြုပျခနျးး အကယျြအဝနျးနဲ့ အခြုပျသားဦးရဟော လောကျငှခွငျးမရှိဘူးလို့လညျး သိရပါတယျ။
” ကလေးမွို့မရဲစခနျးက ၇ ယောကျပွေးတာ ၆ ယောကျပွနျမိပွီ၊ ၁ ယောကျကတော့ လှတျမွောကျနတေုနျးပဲ”လို့ စဈကိုငျးတိုငျးရဲတပျဖှဲ့မှ ရဲအရာရှိတဈယောကျက ပွောပါတယျ။
ကလေးမွို့မရဲစခနျး အခြုပျခနျးက အခြုပျသားတှေ အခြုပျခနျး ဖောကျထှငျးထှကျပွေးတာနဲ့ ပတျသကျလို့ စဈကိုငျးတိုငျးရဲတပျဖှဲ့ ဒုတိယ တိုငျးရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးကွီး စောမွငျ့ဟာ တပျဖှဲ့အတှငျး စဈဆေးမှုတှဆေောငျရှကျဖို့ ကလေးမွို့ကို ထှကျခှာသှားပွီလို့လညျး သိရပါတယျ။
#voiceofmyanmar #VOM #မကှေး #အခြုပျသားထှကျပွေး
မကွေးတိုင်းနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ ရဲအချုပ်ခန်းဖောက်ပြီး အချုပ်သားတွေ ထွက်ပြေး
မကွေး၊ အောက်တိုဘာ ၆ -၂၀၂၀
မကွေးတိုင်း၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ ပွင့်ဖြူမြို့၊ ပွင့်ဖြူမြို့မရဲစခန်းက အချုပ်ခန်းနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့၊ ကလေးမြို့မရဲစခန်းက အချုပ်ခန်းတွေထဲက အချုပ်ကျခံနေသူတစ်ချို့ ဖောက်ထွင်းထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကနေ သိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ မနက် ၅ နာရီခွဲအချိန်ခန်းက မကွေးတိုင်း၊ ပွင့်ဖြူမြို့၊ ပွင့်ဖြူမြို့မရဲစခန်း အချုပ်ခန်းက အချုပ်သားတစ်ယောက်နဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့၊ ကလေးမြို့မရဲစခန်း အချုပ်ခန်းက အချုပ်သား ၇ ယောက်ဟာ အချုပ်ခန်းကို ဖောက်ထွင်းထွက်ပြေးကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
” ပွင့်ဖြူအချုပ်က ဆိုင်ကယ်သူခိုး ဆိုင်ကယ်ရာဇာ တရားခံတစ်ယောက် အချုပ်ခန်းထဲက မိလ္လာခုံပေါ်ကနေ မျက်နှာကျက်ကို ဖောက်ထွင်းထွက်ပြေးတာပါ၊ ကလေးရဲစခန်းကတော့ ဘယ်လိုပြေးသလဲ မသိဘူး၊ အချုပ်သား ၇ ယောက်ဖောက်ထွင်း ထွက်ပြေးတာ ၆ ယောက်ပြန်မိပြီး ၁ ယောက်ကတော့ ထွက်ပြေးလွှတ်မြောက်နေတုန်း ဖြစ်တယ်”လို့ ရဲဝန်ထမ်း တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။.
ကလေးမြို့မရဲစခန်း အချုပ်က အချုပ်သား ၇ ယောက်ဟာ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့ မနက် ၃ နာရီအချိန်က အချုပ်ခန်းကို ဖောက်ထွင်းထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
” မကွေးတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးလှိုင်တင့်က မြိုင်မြို့နယ်၊ ကန်းနီရွာမှာဖြစ်တဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင် ကိုမြင့်နိုင် အိမ်ဖျက်စီးခံရတဲ့ ကိစ္စသွားနေတဲ့အချိန်မှာ ပွင့်ဖြူမြို့မရဲစခန်း အချုပ်ခန်းဖောက်ပြေးခံရတာဖြစ်တယ် ” လို့ ပွင့်ဖြူမြို့မရဲစခန်းက ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါ ညွှန်ကြားချက်တွေထဲမှာ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ၆ ပေအကွာ နေထိုင်ရမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပေမမယ့် လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့ ရဲစခန်း အချုပ်ခန်းတွေထဲမှာ အဲ့ဒီ ညွှန်ကြားချက်အမိန့်ကို လိုက်နာဖို့ အချုပ်ခန်းး အကျယ်အဝန်းနဲ့ အချုပ်သားဦးရေဟာ လောက်ငှခြင်းမရှိဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
” ကလေးမြို့မရဲစခန်းက ၇ ယောက်ပြေးတာ ၆ ယောက်ပြန်မိပြီ၊ ၁ ယောက်ကတော့ လွတ်မြောက်နေတုန်းပဲ”လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
ကလေးမြို့မရဲစခန်း အချုပ်ခန်းက အချုပ်သားတွေ အချုပ်ခန်း ဖောက်ထွင်းထွက်ပြေးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ဒုတိယ တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး စောမြင့်ဟာ တပ်ဖွဲ့အတွင်း စစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ ကလေးမြို့ကို ထွက်ခွာသွားပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #မကွေး #အချုပ်သားထွက်ပြေး